कोरोनाको खोप पत्ता नलागेसम्म अमेरिका प्रवेशमा प्र*तिबन्ध ! – Butwal Sandesh
कोरोनाको खोप पत्ता नलागेसम्म अमेरिका प्रवेशमा प्र*तिबन्ध !
एजेन्सी । कोरोनाको खोप पत्ता नलागेसम्म अमेरिका प्रवेशमा प्रतिब*न्ध लगाउनुपर्ने त्यहाँका सं*क्रामक रो*ग विशेषज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
अमेरिकाका शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी डा. एन्थोनी फाउसीले अमेरिका यात्राको प्र*तिबन्ध कोरोनाको खोप पत्ता नलागेसम्म कायम गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । टेलिग्राफ पत्रिकालाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा फाउसीले प्रतिबन्ध कोरोना भाइरसको खोप पत्ता नलागेसम्म जारी रहन सक्ने बताएका हुन् ।
उनले अमेरिकामा कोरोनो भाइरसको सं*क्रमणको प्रकोप नरोकिएको र अझै केही समय लाग्ने भन्दै यात्राको प्र*तिवन्ध हट्न अझै महिनौं लाग्ने बताएका हुन् । लकडाउनमा छुट दिएसँगै दोस्रोपटक कोरोना सं*क्रमणको दर पहिलाकै अवस्थामा फैलिन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरुले बताइरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।
गत मार्चमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युरोप, बेलायत, चीन र ब्राजिलबाट अमेरिका प्रवेश प्र*तिबन्ध लगाएका थिए । अमेरिकामा मंगलबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसको सं*क्रमणबाट १ लाख १८ हजारभन्दा बढीको मृ*त्यु भएको छ भने २१ लाख ८२ हजारभन्दा बढी सं*क्रमित भएका छन् ।